Accueil > Gazetin'ny nosy
Delegasionina mafonja avy amin’ny fitondram-panjakana no tonga tetsy Anosy, omaly, nitokana ny fahavitan’ny zaridaina manamorona ny farihin’Anosy amin’ny endriny vaovao. Tsara marihana ety amboalohany aloha fa teo amin’ny tantaran’ity Madagasikara ity dia sambany angamba no nitokana asa fanavaozana sy fanatsarana zaridaina iray ny filohan’ny repoblika, ny praiminisitra sy ny minisitra maromaro ao anatin’ny governemanta raha tsy tamin’izao fitondran-dRajaonarimampianina izao. Raha any amin’ny firenen-kafa mantsy dia sarotra ny hinoana fa hiaraka hitokana zaridaina iray ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta. Raha ny lojika, ary izany no fahita maneran-tany, dia ny ben’ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky no mitokana fotodrafitrasa tahaka izao. Naharitra iray volana sy tapany ny fotoana nanaovana ity tetikasan’ny filoham-pirenena ity ary vola mitentina hatrany amin’ny 300 tapitrisa ariary no lany tamin’izany. Raha ny fanazavana nomen’ireo tompon’andraikitra, tsy azon’ny be sy ny maro idikidirana toy ny teo aloha intsony ity zaridaina etsy Anosy ity fa manomboka izao dia andoavam-bola ny miditra ao. Nomena ny orinasa tsy miankina ihany koa ny fitantanana azy mba tsy ho mora simba fa ho voakojakoja tsara ny zaridaina. Manomboka eto izany dia tsy misy hidiran’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra intsony ity zaridaina etsy amin’ny farihin’Anosy ity na ny kely aza satria efa nomen’ny fanjakana foibe ny tsy miankina ny fitantanana azy. Ny azo ambara manoloana izany rehetra izany dia voadaka am-bavafo tsara i Lalao Ravalomanana sy ny vadiny izay mihevitra ho tompon’ity Antananarivo ity. Fa maninona tokoa moa no tsy maintsy nomena ny orinasa tsy miankina ny fitantanana sy ny fikojakojana an’io zaridaina io fa tsy nomena ny kaominina Antananarivo-Renivohitra? Tsy mahatoky ireo mpitantana ny tanàna ve ny fitondrana HVM sa tsy tokony ho tantanina ben’ny tanàna avy amina firehana pôlitika mpifanandrina amin’ny HVM ny zava-bitan’i Hery Rajaonarimampianina? Marihana fa nandritra ny lanonana fanokanana ity zaridaina ity, omaly, dia tsy nisy na iray tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra no tonga nanatrika izany teny an-toerana. Izany rehetra izany no mbola manaporofo hatrany fa tsy misy zavatra mandeha araka ny tokony ho izy intsony eto amin’ity Madagasikara ity ka tsy mahagaga raha miha mitotongana ny firenena.
Zandary mpivarotra bala sy basy: Nohodidin’ny olona marobe ny lapan’ny fitsarana
Toa ny foara teo amin’ny manodidina ny fitsarana tao Ambositra amaly alarobia faha 07 febroary 2018 nanomboka tamin’ny tolakandro ka hatramin’ny misasakalina. Tonga vory teo amin’ny toerana ny vahoaka hijery ny tambazotran’olona mpamatsy bala sy basy ny dahalo any amin’ny faritra Amoron’i Mania. Ramatoa iray no tratra nivarotra bala efa ho tapa-bolana teo izay. Nanao ny asany ny “groupement” an’ny zandary ao Ambositra, izay tena hita fa miasa mafy mihitsy hatramin’ny nahatongavan’ilay lehibeny amin’izao fotoana izao.
Noho izany dia olona 19 no voarohirohy amin’ity raharaha ity ka nisy zandary avy ao Ankorombe eny amin’ny sekoly mpanofana zandary. Tonga hatrany Ambatofinandrahana ny fanadihadiana amin’izao fotoana izao ary fantatra fa misy olona maromaro koa no nosamborina ankoatr’ireo efa azo ao Ambositra ireo.
Liana hahafantatra ireo olona mpanao trafikan’ny fitaovam-piadiana sy mampijaly ny vahoaka ireto ny mponina aty Amoron’i Mania.
Marihina fa ireto olona ireto dia mpivarotra ihany fa misy olona lehibeny aty Antananarivo izay mpamatsy azy ireo raha ny loharanom-baovao ihany. Moa ve ho tonga hatrany izao fanadihadiana izao ka hahalalana ny tena marina amin’ity tambazotra ity. Basy sy bala avy any ampitan-dranomasina no amidin’izy ireo ka tsy maintsy olona manana fahefana sy mahalala olona amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato sy amin’ny seranan-tsambo any Toamasina no isan’ny mpampiditra ireo fitaovam-piadiana ireo.
Hatramin’ny fotoana nifaranan’ny fanoratana tato amin’ny gazety dia mbola tsy nahazo ny tohin’ny vaovao izahay.